Izikolo zeZonyango eziBiza amaxabiso aphantsi eAustralia zaBafundi beZizwe ngeZizwe ngo-6
Nalu uluhlu lwezikolo zonyango ezingabizi kakhulu eAustralia zabafundi bamanye amazwe abafuna ukulandela isidanga sezonyango phesheya kodwa abakwazi ukufikelela kwizikolo ezibiza kakhulu. Ukufunda nayiphi na inkqubo yezonyango kwezi yunivesithi zase-Australia zidweliswe apha zitshiphu xa kuthelekiswa nezinye izikolo zeli lizwe.
I-Australia iphakathi kwezona ndawo ziphambili zemfundo zabafundi bamanye amazwe kwaye zihlala zibekwa ecaleni kweCanada ukuvula iingcango zalo ngokubanzi kubafundi abavela kuzo zonke iindlela zobomi zokuyalela kwimfundo esemgangathweni. Iiyunivesithi zaseOstreliya zibambe iwonga lokubonelela ngemfundo ekumgangatho wehlabathi kuluhlu olwahlukeneyo lweenkqubo ezinje ngeShishini, Ubunjineli, uLuntu, ubuGcisa, amayeza, njl.njl.
Udumo lwehlabathi lwase-Australia ekunikezeleni ngemfundo ekumgangatho wehlabathi kungqinwa okanye kwaboniswa ngegalelo lalo kwizinto ezintsha ezintsha kwiinkalo ezahlukeneyo zokufunda kunye nezibalo ezivela kumaqonga akumgangatho weeyunivesithi.
Njengazo zonke ihabhu zemfundo ezidumileyo, ukufunda e-Australia kukhuphiswano olukhulu kubafundi bamanye amazwe kwaye kuya kufuneka uhlangabeze uluhlu lweemfuno zemfundo ukuze wamkelwe kwiiyunivesithi. Ezi mfuno ziyahluka ngokwenkqubo kunye nenqanaba lokufunda kodwa ngokubanzi kunzima kubafundi bamanye amazwe kuba bafuna ukwamkela abafundi abagqwesileyo.
Ukuthetha ngobunzima, iinkqubo zonyango zezona nkqubo zinzima emhlabeni, kunye neemfuno zemfundo zokuzifunda ziphakathi kwezona zinzima ukuhlangabezana nazo. I-GPA ephezulu iyafuneka kunye neminye imisebenzi ebalaseleyo yiyo loo nto kungekho bantu baninzi ebaleni njengoko kungekho baninzi abantu abanokuthatha ukuyifunda.
Iinkqubo zonyango ukuba nzima yinto eqhelekileyo, ndiyathetha ukuba uphethe ubomi obungumsebenzi otyhafisayo kwaye kufuneka ubengoyena mntu ubalaseleyo koko ukwenzayo, kwaye ungaphelelwanga kwizikhungo zemfundo ezidumileyo njenge-US ne-Australia. Ngoku, khawufane ucinge xa ​​ufuna ukufundela inkqubo yezonyango kwilizwe elifana neCanada, Ostreliya, okanye iUnited States njengomfundi wamazwe aphesheya.
Imfuno yezifundo zokufunda kwisikolo sezonyango e-Australia njengomfundi wamazwe aphesheya ngokumangalisayo kwaye injalo nemali yokufunda. Iindleko zokuphila zikwindawo ephezulu kwaye ziba phakathi kwe-1, 400 ukuya kwi-2,500 ye-AUD ngenyanga - malunga ne- $ 1,000 ukuya kwi- $ 2,000- egubungela indawo yokuhlala, ukutya, kunye nemisebenzi yoluntu.
Ukuba unokwenza uhlahlo-lwabiwo mali phambi kwexesha kwaye uncedise ngoncedo lwezezimali ungoyisa ngokulula iindleko zokuphila eziphezulu kunye nokujongana nemali yokufunda ephezulu, kuya kufuneka ufake isicelo kwizikolo zonyango ezisezantsi eAustralia zabafundi bamanye amazwe abadweliswe kwaye baxoxwa kweli nqaku.
Izidingo zemfundo zabafundi bamanye amazwe abafuna ukulandela inkqubo yezonyango kwiyunivesithi yase-Australia zihlala zinzima njengoko benditshilo ngaphambili kwaye ziyahluka kwiiyunivesithi.
Nangona kunjalo, ukuba ufaka isicelo sokufumana isidanga sebhatshela kufuneka ukuba ugqibile iminyaka eyi-12 yemfundo kwaye ukuba wenza isicelo senkqubo yokuthweswa isidanga, kuya kufuneka ukuba ugqibe kwaye ufumane isidanga se-bachelor kwikhosi yesayensi.
I-GAMSAT okanye i-MCAT ihlala ifuneka ukuba ufaka isicelo senkqubo ye-MD kodwa bonke abafundi kufuneka babe nobungqina besiNgesi njenge-IELTS okanye i-TOEFL kunye nemvume yomfundi okanye i-visa yabafundi.
1 Sisiphi isikolo sezonyango esona sitshiphu e-Australia?
2 Ngaba iiyunivesithi zaseAustralia ezinamaxabiso aphantsi zibonelela ngezifundo zokufunda?
3 Izikolo zexabiso eliphantsi e-Australia zaBafundi beZizwe ngeZizwe
3.1 ISikolo sezoNyango se-ANU (ANUMS)
3.2 Isikolo sezoNyango i-Curtin
3.3 Isikolo seMonash sezoNyango
3.4 KwiYunivesithi yeBond
3.5 ISydney Medical School
3.6 Isikolo seDyunivesithi saseDeakin
Sisiphi isikolo sezonyango esona sitshiphu e-Australia?
IYunivesithi yesizwe yaseAustralia yeyona ndawo inexabiso eliphantsi yokufunda iinkqubo zonyango eOstreliya.
Ngaba iiyunivesithi zaseAustralia ezinamaxabiso aphantsi zibonelela ngezifundo zokufunda?
Ewe. Iiyunivesithi ezingabizi kakhulu e-Australia kunye nezinye iiyunivesithi zaseOstreliya zibonelela ngeentlobo zeenkqubo zokufunda kwabafundi basekhaya kwaye zincinci kakhulu kubafundi bamanye amazwe.
Ngaphandle kokuqhubeka, masihle siye kwizikolo zonyango ezingabizi kakhulu eOstreliya zabafundi bamanye amazwe…
Izikolo zexabiso eliphantsi e-Australia zaBafundi beZizwe ngeZizwe
Apha ngezantsi zizikolo zonyango ze-6 ezingabizi kakhulu e-Australia zabafundi bamanye amazwe;
ISikolo sezoNyango se-ANU (ANUMS)
Esi sisikolo sezonyango sase-Australia (i-ANU) kwaye sesinye sezikolo zonyango ezingabizi kakhulu e-Australia zabafundi bamanye amazwe njengoko ibonelela nge-bachelor kunye nabaphumelele kwizidanga zonyango ngamazinga afanelekileyo.
I-ANUMS yasekwa ngo-2003 kwaye inikezela ngezifundo kwi-Bachelor of Medicine, iBachelor of Surgery (MBBS), iiMasters kwezonyango nakwezempilo, iBachelor of Philosophy, kunye nePh.D. Imali yokufunda kwizidanga zokuqala $56,736 kwaye $30,096 Iinkqubo zokuthweswa izidanga rhoqo ngonyaka.
IYunivesithi yesizwe yaseOstreliya ikwabonelela ngezifundo zokufunda kubafundi bamanye amazwe bayenza enye yeeyunivesithi ezingabizi kakhulu e-Australia ezibonelela ngezifundo zokufunda kubafundi bamanye amazwe. Inkxaso mali yokufunda, onokuyifumana Apha, inokusetyenziselwa ukuhlawula umrhumo wokufunda kwinkqubo yakho yezonyango kwi-ANU.
Isikolo sezoNyango i-Curtin
Esi sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseCretin kwaye sesona sikolo sitsha kwiFakhalthi yeSayensi yezeMpilo ebhalise abafundi bayo bokuqala kwi2017. Isikolo sezonyango sinikezela ngeenkqubo zesidanga sokuqala kunye nesidanga sokuqala esiyi-MBBS, iSayensi yezeMpilo, iTekhnoloji yezeMpilo, iParamedicine, kunye neNgqondo kunye izifundo zonyango.
Isikolo i-Curtin Medical School sidweliswe apha kuba sesinye sezikolo zexabiso eliphantsi e-Australia zabafundi bamanye amazwe. Imali yokufunda yi- $ 112,134 ngonyaka engabandakanyi iindleko zeencwadi zezifundo. Apha, abafundi bavezwa kuluhlu olubanzi lwezixhobo zokuphucula izakhono zabo zonyango.
Isikolo seMonash sezoNyango
Isikolo seMonash sezoNyango sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseMonash kwaye zibonelela ngemfundo ekumgangatho wehlabathi kugxilwe kukhuseleko lwezigulana kunye nokusebenza ngobuchule. Iinkqubo zonyango zibonelelwa kwisidanga sokuqala kunye neenkqubo zokuthweswa isidanga ukulungiselela abafundi ukuba batshintshe ubomi kuluntu lonke e-Australia nakwihlabathi liphela.
Ukuba ucinga ngokufundela amayeza phesheya, unokufuna ukuthathela isicelo kwiMonash School of Medicine. Bamkela abafundi bamanye amazwe kwaye iifizi zabo zezifundo ziphakathi kwexabiso eliphantsi. Imirhumo yeyunithi yeyunithi yesikolo sezonyango saseMonash yi-AUD $ 4,937.50, kwikhosi yezifundo, umrhumo ngeyunithi nganye yi-AUD $ 29,625 ngaphandle kweencwadi zezifundo.
I-Faculty yeSayensi yezeMpilo kunye noNyango sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseBond kwaye ikwisinye sezikolo zonyango ezingabizi kakhulu eOstreliya zabafundi bamanye amazwe. Icandelo lezonyango linegama lokubonelela ngeenkqubo zokuthweswa isidanga kuqeqesho olunxulumene nempilo.
Ezi nkqubo zesidanga zinikezelwa kwinqanaba lesidanga sokuqala kunye nakwinqanaba lokufunda, zibandakanya iBachelor of Health Science, iBachelor yeBiomedical Science, iDiploma yokuthweswa isidanga kwi-Healthcare Innovations, Master of Science ngophando, uGqirha weFilosofi nabanye.
Ungasithathela ingqalelo isicelo senkqubo yezonyango, sesinye sezikolo zonyango ezingabizi kakhulu eOstreliya zabafundi bamanye amazwe abanemali yokufunda eyi- $ 317,114 ye- $ 47,676 ye-bachelor kunye ne- $ XNUMX ngonyaka yabafundi abaphumeleleyo.
ISydney Medical School
Esi sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseSydney, yasekwa ngonyaka we-1856 kwaye sisikolo sokuqala kwezonyango e-Australia. Kubekwe kwinqanaba le-19th Esona sikolo sigqibeleleyo kwezonyango emhlabeni, esokuqala e-Australia, kunye nesinye sezona zikolo zibiza ixabiso eliphantsi e-Australia.
Iinkqubo zonyango zinikezelwa kwinqanaba lesidanga sokuqala kunye nenqanaba lokufunda kwabafundi basekhaya nakwamanye amazwe. Imisebenzi yokufundisa kunye nophando igubungela uluhlu olubanzi lwezinto ezinje ngesikhumba, amayeza, unyango lwengqondo, utyando, isibulala-ntlungu, impilo yabantwana kunye nokufikisa, amayeza onyango olunzulu, kunye nokunye.
ISydney Medical School ibalwa phakathi kwezona zikolo zibiza ixabiso eliphantsi eOstreliya ngenxa yemali ephantsi yokufunda kwabafundi bamanye amazwe. Imali iyonke yemali yokufunda yi-AUD $ 251,520
Isikolo seDyunivesithi saseDeakin
Esi sisikolo sezonyango kwiDyunivesithi yaseDeakin sesinye sezona zikolo zifikelelekayo kwezonyango eOstreliya kwaye sinikezela ngeminyaka emine, ukungenela izidanga, iDigri yezoNyango (MD). Yayisungulwa kwi-2008 kwaye inenani elipheleleyo labafundi be-520 elibandakanya abafundi basekhaya nakwamanye amazwe.
Zonke iikhosi ezifundiswayo kwiSikolo sezoNyango zihlelwe ngokwamacandelo ahlukeneyo afaka uGqirha kwezonyango, iMifanekiso yokuNyanga, impilo yezolimo kunye namayeza, iMpilo kunye nesayensi yezonyango, i-Master of Philosophy, kunye nezinye.
Isikolo iYunivesithi iDeakin seYunivesithi yoNyango sesinye sezikolo zonyango ezingabizi mali ininzi eOstreliya zabafundi bamanye amazwe benemali iyonke ye-AUD 255,200.
Ezi zezona zikolo zibiza ixabiso eliphantsi eOstreliya zabafundi bamanye amazwe kwaye ngelishwa lilishwa nje ukuba zi-6 zazo. Ostreliya ayisiyondawo ingabizi kakhulu ukuba abafundi bamanye amazwe bafundele, bathethe ngakumbi ngokufundela isidanga sobugqirha.
Izikolo zonyango ze-6 ezidweliswe apha zisenokukunceda ekwenzeni ukwamkelwa kwakho, akukho mfuneko yokuba zibeninzi ngaphambi kokuba uqale isicelo. Nokuba kungenxa yezifundo zesidanga sokuqala okanye isidanga, kuya kufuneka uhlangabeze iimfuno zemfundo zeziko lakho lokubamba, kuya kufuneka uphande iimfuno ezahlukeneyo njengoko ziyahluka kumaziko.
Izidingo zinokwahluka ngokwamazwe, kuya kufuneka uyijonge leyo. Ukwenza uphando kulula kakhulu, amakhonkco kwisikolo ngasinye sezonyango esidweliswe apha anikwe, cofa nje kwikhonkco kwaye ufunde ngakumbi malunga neemfuno ezithile zenkqubo.
Kuya kufuneka uyazi ukuba iimfuno zemfundo ziya kuba phezulu xa kuthelekiswa nezinye izikolo zonyango kwiziko lezemfundo elingaziwayo. Ukuba awukwazi ukudibana nabo, ungajonga amanye amazwe anikezela ngemfundo enexabiso eliphantsi ngokubanzi kubafundi bamanye amazwe okanye ufake isicelo sokufunda. Sipapashe amanqaku alolu hlobo kwaye unokuwafumana kwizindululo ezingezantsi.
I-5 yeeDyunivesithi eziGqwesileyo eAfrika kwezamayeza ngoku
Izikolo ezili-18 ezilula zamazinyo zokungena | I-US, UK, Canada
Ufundisisa njani amayeza eCanada simahla
I-13 yeeDyunivesithi eziGqwesileyo eOstreliya zaBafundi beZizwe ngezizwe
Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Isifundo e-Australia
Izikolo zonyango ezingabizi kakhulu eAustralia zabafundi bamanye amazwe
Post Previous:Izikolo eziPhakamileyo ezi-15 eScarborough Canada
Okulandelayo Post:Iindlela ezi-3 zokuKhusela iMali mboleko yaMazwe ngaMazwe eCanada
Pingback: 13 Izikolo eziPhezulu zeZonyango eziFundisa simahla i-2022
Akwaowo Akpan uthi:
Agasti 23, 2021 kwi 7: 29 pm
Oku kufuneka ndivume ukuba yindawo efanelekileyo yeblogi. Gcina njalo bhuti ulwazi lwakho luyinyani kwaye lunomdla.
Juni 20, 2021 kwi-11: 55
Umxholo wale posi unomdla kakhulu. Ndiphefumlelwe ukuba ndenze uphando emva kokufumana ulwazi kulo mxholo.